17 Desambra 2018 - FJKM Québec - Canada Ho antsika kristiana dia tsy ataotao foana ny fanomezana anarana fa misy dikany sy tanjona ary fenitra kendreny.
16 décembre 2018 by Njaka Ramanandafy
SAMOELA VOALOHANY 25 : 18-31
25:18 Dia nandeha faingana i Abigaila ka naka mofo roanjato sy divay eran’ny tavoara roa sy ondry dimy voavoatra sy lango indimin’ny vata sy takela-boaloboka maina zato ary ampempan’aviavy roanjato, dia nasampiny tamin’ny boriky izany.
25:19 Ary hoy izy tamin’ny zatovony: Mandehana eo alohako, indro, izaho hanaraka anareo; nefa i Nabala vadiny tsy mba nilazany.
25:20 Ary tamin’izany, nony nitaingina ny borikiny izy ka nidina tao amin’ny takon’ny havoana, dia indro, i Davida sy ny olony nidina nanatona azy, ary izy nifanena taminy.
25:21 Ary i Davida efa nilaza hoe: Foana tokoa ny niarovako izay rehetra nananan’ ilehiny tany an’efitra, ka tsy nisy very na inona na inona; fa novaliany ratsy ny soa nataoko.
25:22 Mba hataon’Andriamanitra toy izany anie ny fahavalon’i Davida, eny, mihoatra noho izany aza, raha dia havelako hisy miangana na dia lehilahy iray aza izay mety ho azy ambarapahazavan’ny andro.
25:23 Ary i Abigaila, raha nahita an’i Davida, dia niala faingana tamin’ny boriky ary niankohoka teo anatrehan’i Davida ka nitsaoka azy.
25:24 Dia niankohoka tamin’ny tongony izy ka nanao hoe: Aoka ho ahy dia ho ahy ity heloka ity, tompokolahy; masina ianao, avelao ny ankizivavinao hiteny eto anatrehanao, ka henoy ny tenin’ny ankizivavinao.
25:25 Masina ianao, aoka ny tompoko tsy hisaina io Nabala lehilahy tena ratsy fanahy io, fa araka ny anarany ihany no toeny; Nabala no anarany, ary hadalana no ao aminy; fa izaho ankizivavinao, tompoko, tsy mba nahita ny zatovo nirahinao.
25:26 Koa ankehitriny, tompoko, raha velona koa i Jehovah, ary raha velona koa ny fanahinao, i Jehovah efa niaro anao tsy hahazo heloka amin’ny fandatsahan-dra ary tsy hamaly ho an’ny tenanao; ary avelao ny fahavalonao sy izay mitady hanisy ratsy anao, tompoko, ho tahaka an’i Nabala.
25:27 Ary izao saotra nentin’ny ankizivavinao aminao izao, tompoko, dia aoka homena ny zatovo manaraka ny Tompoko.
25:28 Masina ianao, mamela ny fahadisoan’ny ankizivavinao, fa i Jehovah hampaharitra ny taranaky ny tompoko tokoa; fa ny tompoko miady ny adin’i Jehovah, ary tsy misy ratsy ho hita aminao amin’ny andro rehetra iainanao.
25:29 Nefa raha misy olona mitsangana hanenjika anao ka mitady ny ainao, dia hofehezina amin’ny fehin’aina ao amin’i Jehovah Andriamanitra ny fanahin’ny tompoko, fa ny fanahin’ ny fahavalonao kosa dia hatorany toy ny eo amin’ny foitran’antsamotady.
25:30 Ary amin’izany, raha i Jehovah mahavita amin’ ny tompoko araka ny soa rehetra nilazany anao ka manendry anao ho mpanapaka an’i Israely,
25:31 dia tsy ho alahelo na ho nenina amin’ny fon’ny tompoko izany, fa tsy nandatsa-dra foana ianao, na namaly ho an’ny tenanao, tompoko; fa rehefa asian’i Jehovah soa ny tompoko, dia mba tsarovy aho ankizivavinao.
Tsy ataotao foana na vokatry ny kisendrasendra na fandonana ny anarana fa misy dikany sy tanjona ary fenitra kendreny :
« olom-poana , adala , very saina « (and25)no hevitry ny anarany . Asa loatra izay mba nanomezan’ny ray aman-dreniny izany anarany izany . Fa ny tantara dia nahitantsika fa nandia tokoa ny anarany Fampieritreretana ny ray aman-dreny izany . Mba saino tsara ihany ny anarana omena ny zanaka fa hanamarika ny toetrany sy ny fiainany manontolo izany . Na dia mifono « hadalana » aza anefa ny anarantsika satria nohariana sy notorotoroina tamin’ny ota isika (sal 51.5), i Jesoa kosa dia afaka manova ny anarantsika sy ny toetsika handovana ny fiainana raha vonona isika.Diniho ny Jao 1.42sy 2 Sam 12.24-25
2-I Abigaila :
Loham-pianakaviana na firenena , printsy, fototra iorenan’ny trano , matsilo sy hendry ary mahatoky sy be voninahitra no hevitra fonosiny .Tena vehivavy mitomban-dahy i Abigaila ka nahavonjy ny ankohonany tamin’ny loza (and23-31). Vehivavy tsara tarehy izy, saingy tsy variana tamin’ny fijejojejoana fa nahatana toetra mendrika . Vehivavy nanambady lehilahy adala izy , saingy tsy niaraka adala taminy . Vehivavy nahay nihaino ny zatovony izy ka nanana fanetrentena hanao izay tokony ho nataony . Faka tahaka izany !